Yini engenzeka ku-quota yabantu abaziqashile? | Ezezimali Zomnotho
Okunye ukungaqiniseki okukhulu abasebenzi abazisebenzelayo noma abazisebenzelayo abanakho yilokho okuzokwenzeka ekukhokhelweni kwabo ngenyanga. Ngoba lolu hlelo obelusebenze iminyaka eminingi luzolungiswa. Lapho konke kubonakala kukhombisa ukuthi bazocaphuna ngokususelwa kumholo wabo wangempela hhayi ngendlela ehleliwe kuze kube manje. Okuthile okulimaza kakhulu labo abahola imali encane ngomsebenzi wabo wobuchwepheshe. Ngokufaka i-akhawunti encane cishe ama-euro angama-300 njalo ngenyanga.
Kunoma ikuphi, kubonakala sengathi lolu shintsho luyindaba yesikhathi kuphela nokuthi kuphela amandla alolu shintsho asazokwaziwa. Ukugcina wazi ukuthi zizothinta kanjani ibhalansi ye-akhawunti yakho yokonga kusukela lapho kuqhubeke. Ngoba impela, kungahle kube nokuhlukahluka kwama-euro amaningi minyaka yonke, ikakhulukazi kubasebenzi abazisebenzayo noma abazisebenzayo abanemiholo ephansi. Ikakhulukazi lezo ezingaphansi kwe- Umholo Osezingeni Elincane Wokusebenza (SMI) futhi okuyizona ezinezinguquko eziningi okufanele ziqashelwe kusuka kulowo mzuzu oqondile.
Ukulindela lezi zinyathelo kwabazisebenzelayo, akukho okungcono kunokuhlola ukuthi yini ukuma kwamaqembu ezepolitiki ayisihlanu amakhulu ngalolu daba afanele ingxenye enkulu yabasebenzi eSpain. Ngoba kuzoncika kulokho okumele bakukhokhe kuma-akhawunti wombuso ngesikhathi sokuvunywa, okungasebenza ngonyaka ozayo. Ngokuya ngemikhombandlela kahulumeni omusha waseSpain. Njengokuthi kuzokwenzekani ngesilinganiso esiphansi sabasebenza ngokuzimela njengamanje Kushiwo kuma-euro angama-60 ngenyanga ngemuva kokunyuka kwama-euro angama-10 ngoJanuwari owedlule. Kunenhlanganisela eminingi yokuthi yini engenzeka ngalezi zindleko kusukela manje kuqhubeke.
1 Ukuzimela: amaqembu acabangani?
2 Izinketho zephathi ehlukile
3 Ama-Quotas enwetshiwe ngomunye unyaka owengeziwe
4 Ukuguqulwa kwezinkokhelo zabazisebenzayo
Ukuzimela: amaqembu acabangani?
Mayelana nalesi sigaba senhlalo, i-PSOE ikhetha lezi zinyathelo ezilandelayo esidalula okulandelayo:
Ukuguqulwa Kwezimo Ezikhethekile Zabasebenzi Abazisebenzelayo ukuze banikele ngokuya ngeholo labo langempela.
Silwa nomnotho ongaphansi komhlaba nokusetshenziswa kabi kwezinye izibalo zabasebenzi kanye nokunciphisa izithiyo kanye nemithwalo yezokuphatha.
Qinisa uHlelo Lokuqashwa Oluhloniphekile ukuze kutholakale lokho okubizwa ngokuthi kungamanga okuzimele.
Khulisa ukuvikelwa komphakathi ukulinganisa izinzuzo zomphakathi zabantu abaziqashile nalezo ezitholwa ngabasebenzi abahola. Inqubekela phambili ebheke ekutholakaleni kwamalungelo.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, i- Iphathi Ethandwayo uthanda lezi zinyathelo ezilandelayo kuleli qembu lomphakathi:
Izinga lokuzisebenza elizimele leminyaka emithathu yokuqala, futhi liyinwebisela kubantu abaneminyaka engaphezu kwengama-3 ubudala, abangasebenzi isikhathi eside, abangaphansi kweminyaka engama-52, kanye nabantu abasengozini njengabahlukunyezwa ngokobulili.
Izinga elehlisiwe labazisebenzayo abangafiki kuma-SMI.
Ukuvumelana nezimo kombuso wokuhlehlisa eminikelweni yabasebenzi abazisebenzelayo.
Uhlelo lapho labo abazisebenzelayo benokuguquguquka okukhulu nekhono lokukhetha iminikelo yabo.
Izinketho zephathi ehlukile
Kusuka Singagxila kuzinyathelo ezingenhla, yize inamandla amakhulu ekusetshenzisweni kwayo lapho ivikela okulandelayo.
Caphulela kuphela imbuyiselo oyithola hhayi ngokungahlangani kwamanje.
Memezela inkonzo yomphakathi yamatekisi enentshisekelo ejwayelekile futhi isungula isidingo samahora ama-2 wangaphambi kokuthola isivumelwano se-VTC.
Ukulwa nokukhwabanisa okuzimele: khulisa ukuhlolwa futhi kuzothathwa ngokuthi kunobudlelwano bokuqashwa lapho umuntu ozisebenzelayo enomthombo owodwa kuphela wemali engenayo.
Ngenkathi iCiudadanos ukwakheka okusungula ukwahluka kakhulu maqondana nezilinganiso zabancintisana nabo. Ngezinye iziphakamiso ezingachazwa njengezintsha kakhulu.
Ukwelulwa kwesilinganiso esiphansi sabantu abasha abazisebenzelayo kuze kube yiminyaka emi-2, nabantu abaziqashile bezinkampani bazokwazi ukufinyelela kuzinga le-pana.
Abantu abazisebenzayo abanemali engenayo yangempela engaphansi komholo ophansi wonyaka ngeke bakhokhe i-quota.
Ungakhokhi imali iminyaka emibili uma bengabazali.
Ukuthi abazisebenzelayo noma ama-SME bathuthukise i-VAT yama-invoice abangawaqoqanga, ngisho nasekupheleni konyaka
Ukuthi labo abazisebenzayo babala yonke impilo yabo yokusebenza ngempesheni yabo uma bethanda.
Ama-Quotas enwetshiwe ngomunye unyaka owengeziwe
Eminye imiphakathi ezimele ikhethe ukukhulisa isilinganiso esiphansi sabantu abazisebenzelayo. Leli icala elithile le- Umphakathi waseMadrid okunikeza leli thuba kubasebenzi abazisebenzayo. Ngezinga elingama-euro angama-50 ngenyanga iminyaka emibili ilandelana futhi lokho ngumehluko omkhulu maqondana nezinye izindawo zejografi kazwelonke. Yize kuyisiphakamiso esingezinye zezinyathelo ezinikezwe yingxenye enkulu yamaqembu ezepolitiki. Kokunye, noma ngabe kunesiphakamiso sokwelula lesi sikhathi kuze kube seminyakeni emithathu nesilinde umyalo wongqongqoshe wokusebenzisa leli zinga phakathi kwabazisebenzayo.
Yize kufanele kugcizelelwe ukuthi isengezo kuzofanele sikhokhelwe ukumiswa komsebenzi. Ngamanye amagama, ukuqoqa izinhlangano zabasebenzi abazisebenzelayo. Futhi lokho kuyindlela yokuzikhethela yabakhokhi bentela ngokususelwa kulokho okufanela izintshisekelo zabo zobungcweti nezomuntu siqu. Ngale ndlela, kuzodingeka bakhokhe ngaphezulu kancane kwama-euro ayishumi ngenyanga ukuthola lokhu ukumbozwa kokuthi bayeke nini ukwenza umsebenzi wabo ochwepheshe nganoma yisiphi isizathu. Lapho isikhathi esiphezulu sokuqoqa ukungasebenzi isikhathi esiyiminyaka emibili isikhathi seminyaka engaphansi kwemine esinikelwe ngaphansi kwalolu hlelo lokunikela.
Ukuguqulwa kwezinkokhelo zabazisebenzayo
Kunoma ikuphi, konke kuzoba ngezindleko zalokho uhulumeni olandelayo angashaya umthetho eminyakeni elandelayo. Kuzoncika kuphi ekutheni kukhona umehluko ku Iminikelo Yezokuphepha Komphakathi nokuthi kwamanye kungaba usizo olukhulu kuma-akhawunti wakho wobuchwepheshe noma wokonga. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kungakhohlakali ngalesi sikhathi ukuthi izinkokhelo zabasebenzi abaziqashile zenziwa ngaphansi kohlelo olukhokhela labo abahola kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Yini engenzeka ku-quota yabantu abaziqashile?